Momba ny EISEN
Niovaova ny virus Coronavirus vaovao tany Espana mba hisorohana ny famerenana ny tantara. Angletera, Frantsa, Italia ary Alemana dia nanokatra ny politikan'ny fanakanana indray
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-03
Niovaova ny virus Coronavirus vaovao tany Espana mba hisorohana ny famerenana ny tantara. Angletera, Frantsa, Italia ary Alemana dia nanokatra ny politikan'ny fanakanana indray Niova fo ny coronavirus vaovao tany Espana Nandritra ny vanim-potoanan'ny Halloween, hoy ny TIMES, dia hifidy ao amin'ny Parlemanta i Britain amin'ny herinandro ho avy. Noho ny fipoahan'ny valanaretina ...
Geng Shuang dia nanantitrantitra fa amin'ny ady ataon'ny vondrona iraisam-pirenena manohitra ny Coronavirus vaovao, azafady mba hajao ny zava-misy, ny siansa ary ny hafa.
Geng Shuang dia nanantitrantitra fa amin'ny ady ataon'ny vondrona iraisam-pirenena manohitra ny Coronavirus vaovao, azafady mba hajao ny zava-misy, ny siansa ary ny hafa. Tamin'ny 20 martsa, ny mpitondra tenin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny Geng Shuang dia nitarika ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety mahazatra. Nanontany ny mpanao gazety, vao tsy ela akory izay, ny manam-pahaizana tandrefana sasany nilaza fa ...
Mandra-pahoviana no maharitra ny sarontava? Ilaina ve ny manangona sarontava?
Mandra-pahoviana no maharitra ny sarontava? Ilaina ve ny manangona sarontava? Noho ny valanaretina pnemonia miandoha amin'ny satro-boninahitra, dia nitafy efa ho antsasaky ny taona ny sarontava. Hatreto, na dia tsy nandalo aza ny valanaretina, amin'ny tranga sasany, na dia azo esorina tsara aza ny saron-tava, dia mbola tsy afaka miala tanteraka amin'ny fiarovana isika ...